Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): 2013
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကို အလည်ရောက်ဘူးသူ- ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသူများ အနေနဲ့ကတော့- ဘန်ကောက်မြို့- World Trade Centre အနီး ဧရာဝဏ် Grand Hyatt Erawan ဟော်တယ် ရှေ့မှာ ရှိတဲ့- Erawan Shrine ဆိုတဲ့ ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မာဆင်းတု ကို လေးမျက်နှာ ဘုရား လို့ သိရှိထားကြပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးက- ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်နဲ့- ဗေဒင် ယတြာ ကိစ္စများ- အတိတ်နိမိတ် ဆိုရမယ့်- လေးမျက်နှာ ဘုရား ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ကိစ္စတို့ကို သုံးသက်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့- ဗေဒင် ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ ဝေးဝေး နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့- နိုင်ငံရေး ဟောကိန်းတွေ ဟိုတစ်မျိုး ဒီတစ်မျိုး- ပြောပြီး- မှန်သွားယင် နာမည်ကြီးချင် တဲ့ သူထဲမှာ ကျွန်တော်မပါလို့ပါ။
နောက်ပြီးတော့လည်း- အရပ်သား သာမာန် လူတွေ နားလည် ထားတဲ့ သတင်းစာပါ အချက် အလက် လောက်- အများပြည်သူကို ချပြတဲ့- သတင်းလောက် ကိုပဲ သိထားကြရုံ၊ တစ်ခါ- လွတ်လပ် ခွင့်တွေ ရပြန်တော့ လည်း- မခိုင်မာပဲ ထင်မြင်ချက်များ၊ ရေးသားချက်များ၊ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ သတင်း ဖြန့်ချီ မှုများ စသည်တို့ကို ဘက်စုံ ထောင့်စုံ အဖွဲ့အစည်းစုံ က ပြုလုပ်နေကြတဲ့ အနေ အထားမှာ- ကိုယ့်ရဲ့ ရေးသားချက် ဟာ အရောင် တစ်ခုခု စွန်းထင်း သွားမှာကို စိုးရိမ် မိလို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အခါမှာ- သက်ဆင် ရဲ့ ညီမ ဖြစ်သူ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လက် ရှိနာ ၀တ္တရာ ရဲ့- ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အကြမ်းနည်း နဲ့ မဖြေရှင်းပဲ- ထိုင်း ပါလီမာန် ကို ဖျက်သိမ်းတဲ့ ကြေညာချက် ကို - ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး ပရိယာယ်များ နဲ့- အကျွမ်းတ၀င် မရှိသူ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ပရိဿတ်ကြီး အနေနဲ့- အကြောင်းရင်း နဲ့ အခြေအနေမှန်ကို နားမလည်ပါပဲလျှက်- ချီးမွမ်း သာဓု ခေါ် နေကြတာကို မြင်တွေ့ နေရလို့- မလွှဲသာ မရှောင်သာ ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ဦးစွာ- ပြောချင်တာက- မိမိအနေနဲ့- လူတစ်ယောက်ကို လေးစားမယ်၊ ကြည်ညို ထောက်ခံတော့မယ် ဆိုယင်-
အဲဒီသူဟာ- ကိုယ်ကျင့် တရား၊ သိက္ခာ ဖြောင့်မှန် မှု တကယ်ရှိမရှိ၊
သူ့ဆီက အကျိုးတစ်ခု- အခွင့်အလမ်း တစ်ခု ရခဲ့မယ်- ဆိုယင်- ဒီလူဟာ- စေတနာမှန် နဲ့ ပေးတာလား၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထဲကနေ ပေးသလား၊ အလှူ့ရှင် လဘက်နဲ့ မျက်နှာလုပ် တာလား၊ ဆိုတာ ကိုလည်း စဉ်းစား ရပါတယ်။
အလွယ်ဆုံး သိနိုင်တဲ့ နည်းတစ်နည်း ကတော့- သူဟာ ဘယ်လို လူမျိုးတွေနဲ့ အတွင်းကျကျ ရင်းနှီးသလဲ- ဆိုတာပါပဲ။
သူတော်ကောင်း ဟာ သူတော်ကောင်း များ နဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှု နဲ့ ကျွမ်းဝင် စွာ ပေါင်းသင်း ကြသလို- မသူတော်များ ဟာလည်း- သူတို့ ရဲ့ ဥစ္စာ၊ အာဏာ များ အတွက်- အကျိုးတူ နေခဲ့ယင် အပြန်အလှန် ကူညီ စောင်မ ကြပါတယ်။
တစ်ချိန်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၊ ယခု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရဲ့ အကို၊ နောင် အချိန် ကာလ တစ်ခုမှာ- အာဏာ ပြန်ရကောင်း ရလာနိုင်တဲ့ သူတစ်ဦးကို- ကျွန်တော့် အနေနဲ့- ဝေဘန် ရေးသားခြင်း တိုက်ရိုက် မပြုလိုပါ။ သို့သော်- စာရှုသူများ အနေနဲ့ အထက်က- အချက် ပေတံများ နဲ့ တိုင်း နိုင်သလို- နောက်ဆက်တွဲ အချက် အလက်များ အရလည်း သိနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Erawan Shrine ခေါ် လေးမျက်နှာ ဘုရား ဖျက်ဆီးခံရခြင်း။
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁-ရက် နေ့ ညပိုင်း (မိုးမလင်းခင်- နံနက်ပိုင်း) မှာ- အသက် ၂၇-နှစ် အရွယ် သနာကွန် ပက်ဒီပိုလ် Thanakorn Pakdeepol ဆိုတဲ့- လူငယ် တစ်ဦးက- တူကြီး တစ်လက်နဲ့- ဗြဟ္မာဆင်းတု ကို ရိုက်ခွဲ ဖျက်ဆီး ခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းတုရဲ့ မျက်နှာ ၄-ဘက်၊ ကိုယ်ပိုင်း၊ လက် ၆-ဘက် တို့ဟာ တစ်စစီ ဖြစ်သွားပြီး- ပေါင်တော်နဲ့ အခြေပိုင်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဖျက်ဆီးတဲ့ လူငယ်ကိုလည်း- အနားက လူတွေက ၀ိုင်းရိုက်လိုက်တဲ့ အတွက်- အဲဒီ ဒဏ်ရာများနဲ့ အသက်သေဆုံး ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့- ၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁-ရက်၊ နံနက် ၁၁း၃၉ အချိန်၊ နေမင်းဟာ ဆင်းတု အပေါ်တည့်တည့် ကောင်းကင်မှာ တည်တဲ့ အချိန်အခါ မှာ- ဆင်းတု အသစ်ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။
ဆင်းတု ဖျက်ဆီး ခံရတဲ့ အချိန်- ကာလ- ဟာ- ထိုစဉ်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် သက်ဆင် ရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာများ အထွပ် အထိပ် ရောက်နေချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ပြန်လည် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ဘို့ ၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂ -ရက်နေ့မှာ စီစဉ်ထားပါတယ်။
စကားမစပ် ပြောရမယ် ဆိုယင်- ထိုင်းနိုင်ငံမှာ- နိုင်ငံရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုးကွယ် ယုံကြည် ကြတဲ့- အခြား ရုပ်တု တစ်ခုကတော့- Grand Palace အနားမှာ ရှိတဲ့- သျှီဝ နတ်မင်း ရဲ့ ဆင်းတု pillar of the city’ (lak müang) ဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝဏ် ဗြဟ္မာ- ဆင်းတု၊ လေးမျက်နှာ ဆင်းတု ဟာ- ဗေဒင် နက္ခတ် ပညာ တတ်ကျွမ်းတဲ့- ထိုင်းနိုင်ငံ ရေတပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး- Rear Admiral Luang Suwichanphaet အနေနဲ့- ၁၉၅၆-ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၉-ရက်၊ မင်္ဂလာ အခါမှာ- စီးပွားရေး အချက် အခြာကျတဲ့- လမ်းဆုံ နေရာမှာ မင်္ဂလာ အုတ်မြစ် ချပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆင်းတု စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းက- အစိုးရပိုင်တဲ့- Erawan Hotel ကို စတင် တည်ဆောက်တုန်းက- မင်္ဂလာ အခါ အရွေးမှား ခဲ့တဲ့ အတွက်- အလုပ်သမားများ မတော်တစ်ဆ ဖြစ်ခြင်း၊ အီတလီ က မှာယူလိုက်တဲ့- မာဘယ် ကျောက်များ သင်္ဘော အစီးလိုက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း၊ စတဲ့ စတဲ့ ပြဿနာ များစွာ ကြုံခဲ့ရပြီး နောက် ထိုင်း ဗေဒင် ပညာရှင် များက- ထို အဆိုးများကို ပြေပျောက်စေရန် အတွက်- ၁၉၅၆-ခု၊ နိုင်ဝင်ဘာလ ၉-ရက် မှာ- ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာ ဌာန Department of Fine Arts အနေနဲ့ ဆင်းတုတော် ကို တည်ထားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပြီး- မူလ Erawan Hotel ကို ၁၉၈၇ မှာ ဖျက်ဆီးပြီး နောက် အဲဒီ နေရာမှာပဲ- Grand Hyatt Erawan ဟော်တယ် ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
နိမိတ် လေလား။ ယတြာလား။
ရုပ်တုကို ဖျက်ဆီးသူ လူငယ်ဟာ- စိတ်မနှံ့သူ မူဆလင် လူငယ် ဖြစ်သော်လည်း တောင်ပိုင်း အရေးအခင်း နဲ့ အကြမ်းဘက် ကိစ္စများနဲ့ ဘယ်သူကမျှ မဆက်စပ် ကြပဲ- အများစုဟာ- အဲဒီ အချိန်မှာ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် သက်ဆင် အတွက် နိမိတ် အနေနဲ့- ကောက်ယူ ကြပါတယ်။
Thai Rak Thai ပါတီ အနေနဲ့ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၅ အထိ ဆက်တိုက် အောင်မြင် ခဲ့တဲ့- ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် သက်ဆင် ဟာ- ၂၀၀၆ မတိုင်မီ အထိ- အအောင်မြင်ဆုံး နိုင်ငံရေး သမား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း- ၂၀၀၆ ကာလ မှာ တော့- ထိုင်းနိုင်ငံ က- စဉ်းစား တွေးခေါ်နိုင်သူ လူလတ်တန်း စား လောက၊ မြို့ပြ လူနေမှု အတန်းအစား မှာ ဒါတွေ စဉ်းစား လာကြပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် မှုခင်း ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာ နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံက နေ ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ- ရဲ-ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဖြစ် ၁၄-နှစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး- ထိုင်းရဲ တွေရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှု၊ ရာဇ၀တ်များမှာ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်နေကြမှုများကို ကောင်းကောင်းကြီး သိထားသူ- ၀န်ကြီးချုပ်ဟာ- ဘာဖြစ်လို့- မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက် ရေး ဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီး မှာ- ထိုင်းရဲများကို အာဏာကုန် ပေးထားခြင်း ဖြင့်- လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်- ကို ရဲတို့က တရားမ၀င် သတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဖြစ်စေခဲ့သလဲ၊ (ဒီအထဲက တစ်ဝက်ကျော်ဟာ အပြစ်မဲ့ သူများ ဖြစ်ကြပြီး၊ အပြစ်ရှိသူ ဆိုသူများ ဟာလည်း- ရဲများကို လိုင်းမ၀င် နိုင်တဲ့- အသေးအမွှားလုပ်ကိုင် သူများသာ ဖြစ်တယ် လို့ လေ့လာသူများက ဆိုပါတယ်။)
အကြမ်းဘက် နှိမ်နင်းရေး စစ်ပွဲ ဆိုပြီး ပါတာနီ၊ နရသီဝတ်၊ ယာလာ စတဲ့ ဒေသ တွေမှာ- ပွဲကြမ်း ခဲ့တာတွေ၊
တရားရုံးနဲ့ တရားရေး ရာ ဌာန တွေမှာ- သူနဲ့ မသင့်သူတွေကို ဖြုတ်၊ သူ့စကား နားထောင်သူတွေကို ခန့်အပ်၊ အာဏာ ပေးတာတွေ၊
သူရဲ့ ပါတီ ဖြစ်တဲ့ Thai Rak Thai လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ပါလီမာန် ကနေ- သူရဲ့ စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားတွေ၊ သူရဲ့ ခရိုနီ တွေ အတွက် အခွင့်ထူး ရစေမယ့် ဥပဒေ ပြောင်းလဲ မှုတွေ၊
ထိုင်းဘုရင် မင်းမြတ်ကို ဂရုမစိုက်သည့် သဘွယ် ပြုမူ လာတာတွေ၊
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၃-ရက် (တစ်နည်း အားဖြင့်- ပြုပြင် ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ Thai Telecommunication Act (2006) ထိုင်းနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ စတင် အသက်ဝင်တဲ့ နေ့) မှာ- သူပိုင်တဲ့ Shin Corporation ကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ သမာဆပ် ဟိုးလ်ဒင်း ကို ထိုင်းငွေ ဘတ် သန်းပေါင်း ၂ထောင်ကျော် နဲ့ ရောင်းခဲ့ ပေမယ့်- အခွန်တစ်ပြားမှ ပေးစရာ မလိုအောင်- စောစောက တင်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ပထမ အဆင့် ဥပဒေ ပြင်၊ နောက်ပြီး- ဗြိတိသျှပိုင် ဗာဂျင် အိုင်းလန်း မှာ- အမည်ခံ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုထောင်၊ အဲဒီ ကုမ္ပဏီ ကို သူ့ရဲ့ Shin Corporation ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲ (ဥပဒေ ပြင်ထားလို့- အခွန်ဆောင်စရာ မလိုပါ၊)၊ တစ်ခါ ဗာဂျင် အိုင်းလန်း ဟာ- အခွန်လွတ် ဖြစ်တာမို့ အဲဒီကနေ- စင်္ကာပူ နိုင်ငံ သမာဆပ် ဟိုးလ်ဒင်း ကို ရောင်းရာမှာ လည်း အခွန် မပေးရပါ။ သာမာန် ပြည်သူတိုင်းဟာ- ၀န်ထမ်း ဆိုယင် ၀င်ငွေခွန်၊ စီးပွားရေး သမား ဆိုယင်- လုပ်ငန်းခွန်၊ ရောင်းဝယ်ခွန်၊ အမြတ်ပမာဏ ပေါ် မူတည်တဲ့ အမြတ်ခွန် စတာတွေကို ဆောင်ကြရ ပေမယ့်- သူကတော့- အားလုံးကို ရှောင်ဖယ်ပြီး တစ်ပြားမှ မပေးရအောင် လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နေရှင်း သတင်းစာကြီးရဲ့- ၂၀၀၆-ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၃-ရက်၊ အယ်ဒီတာ့ အာဘော် အခန်းမှာ- “The richest man in the Kingdom simply does not have the moral fibre to lead us.” “တိုင်းပြည်က အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မှာ- ကျွန်တော်တို့ကို ဦးဆောင်မယ့် ကိုယ်ကျင့်တရား အမျှင်လေးမျှတောင် မရှိပါ” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာတော့- ပညာတတ် ပြည်သူများ နဲ့ အတိုက်အခံ တို့က နေ သက်ဆင် နှုတ်ထွက်ပေး ဘို့ တောင်းဆို လာပါတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာ- ထိုင်းနိုင်ငံ ဟာ- ပညာရေးလည်း နိမ့်ကျပြီး- ဆင်းရဲသူ ၇၅% ကျော်တဲ့ အတွက်- လယ်သမား ဆင်းရဲသား အများစု အနေနဲ့ ကတော့- ဘတ် ၃၀ ပေးယင်- အလကား ဆေးကုလို့ ရတယ် ဆိုတဲ့- (နိုင်ငံ့ ငွေနဲ့- ပြည်သူ ဆီက အမှတ်ယူထားတဲ့ ကျန်းမာရေး စနစ်) နဲ့- မဲတစ်ပြား အတွက် ဘတ်ငွေ ၅၀၀ လောက် ပေးနိုင်တဲ့- ပါတီကို ကျေနပ် သဘောကျ ထောက်ခံ နေဆဲပါပဲ။
တစ်ဘက်မှာတော့- တစ်ချိန်တုန်းက သက်ဆင်ကို ထောက်ခံ ခဲ့ဘူးတဲ့- မီဒီယာ သမား ဆုမ်ဒီ ကိုယ်တိုင် က ဦးဆောင်ပြီး၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၊ အခြားခြားသော ပါတီဝင်များ က- သက်ဆင် အစိုးရ နှုတ်ထွက်ရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲ အရှိန်များ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကြောင့် အကြပ်တွေ့လာချိန် ၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄-ရက်မှာ- ၀န်ကြီးချုပ် သက်ဆင်ဟာ- ပါလီမာန်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး- ဧပြီလ ၂-ရက် နေ့မှာ ရွေးကောက်ပွဲ အသစ် ကျင်းပဘို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်း မှာ- ယခုအထိ- ၀န်ကြီးချုပ်ပေါင်း ၂၆-ဦး ရှိခဲ့ပြီး၊ ပါလီမာန်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့တာ- စုစုပေါင်း ၁၅-ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး၊ အခု လက်ရှိကာလ ၀န်ကြီးချုပ် ယင်လပ် ရဲ့ ကြေညာချက်က ၁၆-ခုမြောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ပါလီမာန်ကို ဖျက်သိမ်း တာ အကောင်းဆုံးလည်း ဆိုတော့-
ဒီမိုကရေစီ စနစ်မှာ- လူတစ်ယောက် မဲ တစ်ပြားသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းရဲသူ ချမ်းသာသူ၊ စဉ်းစား တတ်သူ၊ မစဉ်းစားတတ်သူ - ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် မဲ တစ်ပြားသာ ပေးခွင့်ရပါတယ်။
ကိုယ့် အကြိုက်လေး (ကိုယ့်ပိုက်ဆံကနေ ကိုယ့်ကို ပြန်ပေးတာ မသိကြပါ။) ပေးသူကို- ထောက်ခံမှာ ဖြစ်တဲ့- တစ်နည်းအားဖြင့်- လူအများ စု ဖြစ်တဲ့- ၇၅% သော တောသူ တောင်သား တွေဆီ က မဲပြန်ရယင် သူတို့ ပဲ နိုင်မယ် ဆိုတာကို သိလို့ လုပ်တာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို လေ့လာ ဆင်ခြင် ဆန်းစစ် တတ်သူ များ အနေနဲ့ ကတော့- သတိထားမိကြပါတယ်။
တစ်ချက်ထဲမှာ- ဆန္ဒပြသူများကို “ကဲ- ဒါက ပြည်သူ့ ဆန္ဒပဲလေ” ဆိုပြီး ဖြေရှင်းပြီး လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ပါလီမာန် ဖျက်သိမ်းပြီး- ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု နိုင်ငံ အ၀ှမ်း လုပ်တိုင်း နိုင်ငံတော် ငွေ ဘတ်သန်းပေါင်း များစွာ ကတော့ ကုန်ကျမှာ အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။
စောစောက ကိစ္စကို ပြန်ကောက်ကြပါစို့-
ဆင်းတုတော် ဖျက်ဆီး ခံရတဲ့ နေ့မှာပဲ- သက်ဆင် မိသားစု ရဲ့ အကြံပေး နက္ခတ်ဗေဒင် ဆရာ Samrit Klomkliang မှ- “ဒါက ဘာကို ပြောသလဲ ဆိုတော့ ၀န်ကြီးချုပ် အနေနဲ့ မတ်လ ၂၉-ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထား မထွက်ပေးယင်- တိုင်းပြည်မှာ သွေးထွက် သံယို ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာပါမယ်” လို့ သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ လေးမျက်နှာ ဗြဟ္မာ ဆင်းတုတော်ကို ဖျက်ဆီးပြီး- အသစ် ပြန်တည်တဲ့ ကိစ္စဟာ- သက်ဆင်ရဲ့ ခေတ်ပျက် ယတြာလေလား လို့လည်း- အချို့က သံသယ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ယတြာတို့ဖြင့် လျှောက်သော လမ်း။
ဆင်းတုတော် ကိစ္စ ဟာ- ယတြာ ဟုတ်မဟုတ် မသိရပေမယ့်- ပြီးခဲ့တဲ့ ယတြာ သမိုင်းလေးတွေကိုတော့- လေ့လာလို့ ရပါတယ်။
၂၀၀၁-ဖေဖေါ်ဝါရီ လ- ကာလ- Thai Rak Thai ပါတီ အနေနဲ့- အောင်မြင်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့ သက်ဆင်ဟာ- အဲဒီ ကတည်းက- ထိုင်ခုံ ပြဿနာ စရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသား အကျင့်ပျက် တိုက်ဖျက်ရေး ဌာန ကနေ- ၀န်ကြီးချုပ် အသစ်စက်စက် ကို ယခင် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ၀န်ကြီးရာထူး ယူခဲ့သူ တစ်ဦး အနေနဲ့- ပိုင်ဆိုင်မှု များ ထိန်ချန် ကြေညာမှု နဲ့ စတင် တရားစွဲပါတယ်။ သက်သေ အထောက်အထားများ အရ- ပြီးခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီး ဘ၀တုန်းက ပိုင်ဆိုင်မှု များကို- သူရဲ့- အိမ်ထိန်း၊ အိမ်ဖေါ်၊ ကားဒရိုင်ဘာ၊ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်း တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင် မှု အနေနဲ့ လိမ်လည် မှတ်ပုံတင် ထားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ- သူ့အနေနဲ့- နိုင်ငံရေး ထောက်ခံချက်များ၊ ယခင်က ရဲဝန်ထမ်း အဖြစ်နဲ့ သင်တန်း အတူတူ တက်ခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေများရဲ့ အကူအညီ များကိုသာ မက- ဂမ္ဘီရ အကူအညီ ကိုပါ သူ့အနေနဲ့ ရယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါကို Pasuk and Baker ရဲ့ ဘိုင်အို ဂရပ်ဖီမှာ- ဖေါ်ပြထားတာကတော့-
သက်ဆင်ဟာ- ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ- ဘုန်းကြီး အရေအတွက် ၁၀၁၇ ပါး၊ ဘုရား ဆင်းတု တော် ၉ ဆူ နဲ့၊ ပရိဿတ် ၃၀၀၀၀ တိတိ တို့နဲ့ ဂါထာ မန္တန် ရွတ်ဆိုခြင်း ကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့- အစွမ်းရှိတဲ့ ဆိုတဲ့ အဆောင်များကိုလည်း ဆောင်ယုံမက- သူ့ရဲ့ အိပ်ယာ၊ ခြင်တောင် တို့ကို ဖုန်းရွှေ အစီအယင် များ အတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။
ဆူရင် ဒေသ ကို လည်ပတ် တဲ့ ခရီးစဉ်မှာလည်း- သူရဲ့ အာဏာ ကို အင်အား မြင့်မား စေဘို့ အတွက်- ဆင်မုဆိုး၊ ဆင်ထိန်းများ နဲ့ အတူ- မှော်အစီ အရင် တစ်ခု ကို လုပ်ဆောင် ခဲ့တယ် လို့လည်း ဘိုင်အို ဂရပ်ဖီ ရေးသူများ က ဖေါ်ပြကြပါတယ်။
ရှေးအခါက စစ်ထွက်မယ့် စစ်သားများဟာ- စစ်မထွက်ခင် ဆင်ရဲ့ ၀မ်းဗိုက်အောက် က ဖြတ်လျှောက် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အစီအရင် ကို သက်ဆင်က လုပ်ဆောင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ- Baan Taklang မြန်မာ အဓိပ္ပါယ် ဆင်ရွာ ကို အစီအရင် အရ- သွားရပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ- တော့- အထူး အစီအရင်များ ပြုထားတဲ့- ဆင်ချွန်း ကို လက်ခံ ရရှိခဲ့ပြီး- ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့- "ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီ ဂါထာ အစီအရင်များ နဲ့ ချွန်းကို- ကျွန်တော့်ကို ဖြုတ်ထုတ်ဘို့ လုပ်သူ၊ ဆန့်ကျင်သူများ အတွက် သုံးပါမယ်" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ (ဒါကို နေရှင်း သတင်းစာ ၂၀၀၆-ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်)
လေးမျက်နှာ ဆင်းတုတော် ဖျက်ဆီးခံရ ပြီးမှာတော့- သက်ဆင်ဟာ- နေ့လည် ပိုင်းမှာ သွားရောက်၊ ငှက် ၉-ကောင် လွှတ်ပြီး အခြား အစီအရင်များ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း၊ နေရှင်း သတင်းစာ ၂၀၀၆-ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆင်းတုတော် ပျက်ဆီးမှု အပေါ် ထိုင်းဗေဒင် ဆရာတို့ အမြင်။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့- လေးမျက်နှာ ဆင်းတုတော် ဖျက်ဆီး ခံရခြင်း အပေါ် ဗေဒင် ဆရာ အားလုံး လိုလို က နိမိတ် ဆိုး အနေဖြင့် ရှုမြင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဗေဒင် ဆရာများ အသင်း Astrological Association of Thailand (AAT) မှ ဆူရတတ်တဖုန် ဆူဝန်နရတ် က အနေနဲ့က- အကယ်၍- လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ သာ ရှေ့ဆက်လုပ်ယင်- အလွန်ဆိုးရွားတာတွေ ဖြစ်လာမှာပဲ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
အခြားထင်ရှားသော ဗေဒင် ဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်သည့်- ပင်ယို ပုံချာရွန် ကလည်း- ပါတီ များ အနေဖြင့်- စုပေါင်း ညှိနှိုင်း အဖြေရှာသင့်ကြောင်း၊ ဗြဟ္မာ အနေနဲ့ မျက်နှာ ၄-ခု ရှိတယ် ဆိုတော့- အစိုးရ၊ အတိုက်အခံ၊ People’s Alliance for Democracy နှင့် ဆင်းရဲသား ဆန္ဒပြသူများ ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့ နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်း ကြမှသာ- ငြိမ်းချမ်း ပါမယ် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
ထိုင်းနိုင်ငံ ဗေဒင် ဆရာများ အသင်း Astrological Association of Thailand (AAT) ၏ ဒု-ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ- ၀ီဝတ် ကျရွန်ဆီရီ အနေဖြင့်- ဗြဟ္မာဆင်းတု နှင့် တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာသည် ဆက်စပ်နေကြောင်း၊ လက်ရှိအားဖြင့် မကောင်းကြောင်း၊ ပြောပြခဲ့၏။
သက်ဆင် နှင့် မိတ်ဆွေ များက မူ- အခြား ဗေဒင် ဆရာ တစ်ဦး၏ နိမိတ် ကောက်ပုံကို ယူခဲ့၏။ ရဲမှူးကြီး ချစ်ချိုင်း ၀ါနာဆာသစ် (ထိုစဉ်က ဒု-၀န်ကြီးချုပ်) အနေဖြင့်- ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဆရာတစ်ဦး နဲ့ ပြောကြည့်ရာမှာ- "ဒါဟာ- Phra Phrom ဆင်းတု တော်ရဲ့ - ကိုယ်တော်တိုင် စတေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်။ ဒါကြောင့် အခြေ အနေတွေ စတင် ကောင်းမွန် လာပြီ၊ ကံဆိုးမှု တွေကို ပယ်ရှား လိုက်ပြီ" ဟု ပြောခဲ့၏။
အင်အားကြီးသော ဓမ္မကာယ နှင့် မဟာမိတ် ဖွဲ့ခြင်း။
ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး တို့သည် ဆက်စပ် နေ၏။
ဤသည်ကို လည်း သက်ဆင်ကောင်းစွာ သိခဲ့ သဖြင့်- ထိုစဉ်က ဘန်ကောက်မြို့တွင်- အင်အား အလွန်ကြီးမားသော - လူပေါင်း သိန်းချီ၍ တစ်ပြိုင်တည်း- ၀တ်စုံပြည့် တရားထိုင် နိုင်သော ဓမ္မကာယ ကျောင်းထိုင်- ဓမ္မချိုင်းယိုး နှင့် ကောင်းစွာ ပေါင်းသင်း၏။
ဓမ္မချိုင်းယိုး အနေဖြင့်- မှားယွင်းသော- တရားပြသမှုများ၊ လွန်စွာ ကြီးမားသော အလွဲသုံးစားမှု များ၊ (ထိုစဉ်က- ထိုဆရာတော်သည်- အီတလီ လုပ် အကောင်းစား ပိတ်ဖြင့်- လုပ်သော အလွန်ဈေးကြီးသည့်- သင်္ဃာန်း ကိုသာ ၀တ်ရုံပြီး၊ ထိုင်းဘုရင် မင်းမြတ်၏ စားတော်ပွဲထက် မညံ့သော- ဆွမ်းကိုသာ ဘုန်းပေးပါသည်။) ကြောင့်- သံဃ၀ိနိစ္ဆယ အဖွဲ့မှ စစ်ဆေး နေချိန်တွင်-
ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာ (၂၀၀၆-သြဂုတ်လ ၂၄) အရ-
The Dhammakaya court case has been dragging on for so long that most people have lost interest. The press is currently too busy with the heated politics of the day to bother with old news. The public is emotionally exhausted with political divisiveness caused by our Dear Leader to take up another controversy. The ailing Supreme Patriarch has long been hospitalised. For Dhammachayo’s supporters who are politicians in power, time is also running out. Now that they are losing their grip, they know they must act before it is too late. (Bangkok Post, 24 August 2006)“ဓမ္မကာယ အမှု သည်- များစွာ အချိန်ဆွဲ ထားသည့် အတွက်- လူအများစု အနေဖြင့်- စိတ်ဝင်စားမှု လျော့နည်း သွားပြီး ဖြစ်၏။ သတင်းစာ တို့သည် လည်း- သတင်းဟောင်းထက် ပူလောင် နေသော နိုင်ငံရေး သတင်းတို့ဖြင့် အလုပ်များနေ၏။ ပြည်သူတို့သည် လည်- ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်များ၏ အငြင်းပွားဘွယ် ကိစ္စတို့ကြောင့်- နိုင်ငံရေး အကွဲအပြဲဖြင့် နွမ်းနယ် နေပြီ ဖြစ်၏။ သံဃာ မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးလည်း- ဆေးရုံ တက်နေရသည် မှာ ကြာလှပြီ ဖြစ်၏။ ဓမ္မချိုင်းယိုး ကို ထောက်ပံ့နေသော- အာဏာရ နိုင်ငံရေး သမားတို့လသည်- အချိန် သိပ်မကျန်တော့။ ယခု အနေဖြင့် သူတို့ ကိုင်ထားသည်များကို လက်လွှတ် ရတောမည် ဖြစ်ပြီး- သိပ်နောက်မကျခင် တစ်ခုခု လုပ်ရပေတော့မည်။”
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ- ဓမ္မကာယ နှင့်- ဓမ္မချိုင်းယိုး တို့၏ အမှု မှာ ကား- ဘာမျှ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲ- ဇတ်သိမ်းသွားကာ- ၄င်း ဓမ္မကာယ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဓမ္မချိုင်းယိုး ကား ပြန်လည် အလံထူ လျှက်ရှိနေ ပါတော့၏။
ထိုင်း အီးတီ နှင့် မြန်မာ အီးတီ။
တစ်ချိန်က- သက်ဆင်ကို- အီးတီ နဲ့ တူတယ် ဆိုပြီး- ထိုင်းတစ်ချို့ က သူ့အား အီးတီ ဟု ခေါ်ခဲ့ ကြဘူးပါသည်။
၂၀၀၆ ခုတွင် ပြဿနာများ များပြားလာပြီးနောက်- သြဂုတ်လ တွင် သက်ဆင် သည်- မြန်မာ အကြားအမြင် ဆရာမ အီးတီ နှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့၏။
အီးတီ အနေဖြင့်- သက်ဆင်အား အကြံပေးချက်များမှာ-
“စက်တင်ဘာလ ၈-ရက် မှ ၂၂- ရက်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပြင်ပတွင် နေထိုင်သင့်သည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော- ဤကာလတွင် နေကြတ်၊လကြတ်များ ရှိပြီး၊ သက်ဆင်၏ ကြယ် အား အမှောင်ဖုံးမည်။ ရပ်ဝေး နိုင်ငံခြားတွင် ပင်ပန်းမှု များကို ကြံ့ကြံ့ခံ နိုင်မည် ဆိုပါက- စက်တင်ဘာ ၂၉ တွင် အင်အားသစ် ရမည်။”
သက်ဆင် အနေဖြင့် အီးတီ ၏ ညွှန်ပြချက် ကို လိုက်နာရန် အတွက်- ထိုရက်ပိုင်းတွင်း နိုင်ငံခြားတွင် နေရန် အကြောင်းပြချက် ကောင်းကောင်းရှိ၏။ စက်တင်ဘာလ ၉-ရက်တွင် ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာ၍- ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ကျင်းပနေသော နယူးရောက် သို့ ဦးတည်၏။ ဟတ်ယိုင်တွင်- ဗုံးပေါက်ကွဲ၍- လူ ၄-ဦး သေဆုံးပြီး၊ ၈၂ ဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၁၆-ရက်တွင်လည်း ပြန်မလာပဲ- စက်တင်ဘာ ၂၂-ရက် မှသာ ဘန်ကောက်သို့ ပြန်ရန် စီစဉ်ထား၏။
အီးတီ၏ ဟောပြောချက်သည်ကား- အလုပ်ပြုတ်လောက် အောင် မှန်တော့၏။
စက်တင်ဘာ ၁၉-ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆုန်ထီ ဦးဆောင်သော ထိုင်းတပ်မတော် သည် သက်ဆင်အစိုးရ အား ဖြုတ်ချပြီး သွေးထွက် သံယို မရှိစေပဲလျှက်- နိုင်ငံ အာဏာကို သိမ်းလိုက်၏။
ထိုနေ့- တိတိပပ အားဖြင့်- စက်တင်ဘာ ၁၉-ရက် သည်- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆုန်ထီ နှင့် ခေါင်းဆောင်များက- ဗေဒင်ဆရာများ နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ရွေးချယ်သော နေ့ဖြစ်တော့၏။
ဤသည်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ - နေရှင်း သတင်းစာကြီးမှ-
“General Sonthi Boonyaratglin, the Army chief, ledasuccessful coup to topple the Thaksin government. His destiny hinged heavily on the auspicious number nine.” The coup took place on the 19th day of the 9th month in the Buddhist year 2549. The day following the coup, General Sonthi appeared on TV at 9:39 am. “It was the number nine all the way.”“ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆုန်ထီ အနေဖြင့်- သက်ဆင် အစိုးရ အား အောင်မြင်စွာ ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ သူ၏ ကံကြမ္မာသည် မင်္ဂလာ နံပတ် ၉-ဂဏန်း ပေါ်တွင် များစွာ မူတည် နေသည်။ အာဏာ သိမ်းမှု ဖြစ်သော နေ့သည် ၂၅၄၉-ခုနှစ်၏ ၉ လ ပိုင်း၊ ၁၉- ရက် နေ့ ဖြစ်ကာ- နောက်နေ့- တီဗွီ ပေါ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆုန်ထီ အား တွေ့မြင်ရသည် မှာလည်း နံနက် ၉း၃၀ ဖြစ်သော ကြောင့်- အားလုံးတို့သည် ၉ ဂဏန်း တို့ ဖြစ်နေသတည်း။ ”
ဆက်လက်၍ - နေရှင်း သတင်းစာကြီးမှ-
“မည်သို့ မည်ပုံ နည်းဖြင့်- မြန်မာ အကြားအမြင် ဆရာမ အီးတီ- အနေဖြင့်- ဤ ညီမျှခြင်း အီကွေရှင်းတွင် ကွက်တိ ပါဝင်လာသည် ကို ကျွန်တော်တို့ မသေချာ။ သို့သော်- ကောလာ ဟဠ သတင်းများ အရ- သူမ သည်- ကြိုတင် သတင်းပေး အနေဖြင့်- အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အနေဖြင့်- ပါဝင်နေမည်လား။ ….. ”
ကဲ- ဒါကတော့- ကျွန်တော် စုဆောင်း သိရှိရသမျှ- သက်ဆင်ရယ်-ဗေဒင်ရယ်-လေးမျက်နှာ ဘုရားရယ်…မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Charles Keyes : The Destruction ofaShrine to Brahma in Bangkok and the Fall of Thaksin Shinawatra: The Occult and the Thai Coup in Thailand of September 2006
Apinya Fuengfusakul. 1993. “Empire of Crystal and Utopian Commune: Two Types of
Contemporary Theravada Reform in Thailand,” Sojourn, 8.1:153-83.
Baker, Chris 2006. “Revival, Renewal and Reinvention: The Complex Life of Thailand’s
Chularat Saengpassa. 2006. “Social Divide, Land Of Sighs,” The Nation, March 12, 2006
Comaroff, Jean and John L. Comaroff. 2002. “Millennial Capitalism, Occult Economies and
the Crisis of Reproduction in South Africa,” in Religion and Sexuality in Cross-
Cultural Perspective, ed. by Stephen Ellingson and M. Christian Green. London:
Routledge. Pp. 223-250.
Cook, Nerida M. 1989. “Astrology in Thailand: The Future and the Recollection of the Past,”
Unpublished PhD dissertation, Australian National University.
____. 1991. “Thai Identity in the Astrological Tradition,” in National Identity and Its
Defenders: Thailand, 1939-1989, ed. by Craig J. Reynolds. Melbourne: Monash
University, Centre of Southeast Asian Studies, Monash Papers on Southeast Asia, No.
25. Pp. 233-260.
Cornwel-Smith, Philip. 2005. Very Thai: Everyday Popular Culture. Bangkok: River Books.
Evans, Grant. 2006. Review of The King Never Smiles: A Biography of Thailand’s Bhumibol
Adulyadej, by Paul M. Handley, Far Eastern Economic Review, September.
Geertz, Clifford. 1980. Negara: The Theatre State in Nineteenth-century Bali. Princeton, N.J.:
Handley, Paul. 2006. The King Never Smiles: A Biography of Thailand’s Bhumipol Adulyadej.
Hanks, Lucien M. 1962. “Merit and Power in the Thai Social Order,” American
Heikkilä-Horn, Marja-Leena. 1996. Santi Asoke Buddhism and Thai State Response. Åbo:
Åbo Adkademis Förlang.
Irvine, Walter. 1982. “The Thai-Yuan ‘Madman,’ and the Modernising, Developing Thai
Nation, as Bounded Entities under Threat: A Study in the Replication ofaSingle
Image,” Unpublished PhD. Dissertation, School of Oriental and African Studies,
Jackson, Peter A. 1999a. “Royal Spirits, Chinese Gods, and Magic Monks: Thailand’s Boomtime
Religions of Prosperity,” South East Asian Research, 7.3:245-320.
Jackson, Peter A. 1999b. “The Enchanting Spirit of Thai Capitalism: The Cult of Luang Phor
Khoon and the Post-Modernization of Thai Buddhism,” South East Asia Research, 7.1:
ARI Working Paper No. 80 Asia Research Institute ● Singapore
Jacobs, Rachelle M. 2002. “Nirvana for Sale?: Buddhism, Wealth, and Modernity in
Contemporary Thailand,” Unpublished PhD Dissertation, Northwestern University
Kasian Tejapira. 2006. “Toppling Thaksin,” New Left Review, 39:5-37
Keyes, Charles F. 1999a. “Moral Authority of the Sangha and Modernity in Thailand: Sexual
Scandals, Sectarian Dissent, and Political Resistance,” in Socially Engaged Buddhism
for the New Millennium: Essays in Honor of the Ven. Phra Dhammapitaka (Bhikkhu
P.A. Payutto on his 60th Birthday Anniversary. Sulak Sivaraksa, ed. Bangkok: Sathira-
Nagapradipa Foundation and Foundation for Children. Pp. 121-47.
____. 1999b. “Buddhism Fragmented: Thai Buddhism and Political Order since the 1970s,”
Keynote address presented at Seventh International Thai Studies Conference,
____. Forthcoming. “Communism, Peasants and Buddhism: The Failure of ‘Peasant
Revolutions’ in Thailand in Comparison to Cambodia,” to appear inafestschrift
honoring Professor May Ebihara, edited by John Marston, in preparation.
Kirsch, A. Thomas. 1977. “Complexity in the Thai Religious System: An Interpretation,”
Journal of Asian Studies, 36.2:241-266.
Nithinand Yorsaengrat. 1999. “Shrine of the Times: The Erawan Shrine draws an increasing
number of devotees from Thailand and many other countries who need to believe in
the benevolence ofasupreme creator,” The Nation, September 19.
Pasuk Phongpaichit and Chris Baker. 2004. Thaksin: The Business of Politics in Thailand.
Pasuk Phongpaichit and Sungsidh Pitiyarangsan. 1994. Corruption and Democracy in
Thailand. Bangkok: Chulalongkorn University, Faculty of Economics, Political
Pattana Kitiarsa. 1999. “‘You May Not Believe but Never Offend Spirit’: Spirit-Medium Cult
Discourses and the Postmodernization of Thai Religion,” Unpublished PhD
Dissertation, University of Washington.
____. 2005. “Beyond Syncretism: Hybridization of Popular Religion in Contemporary
Thailand.” Journal of Southeast Asian Studies. 36. 3: 461-478.
____. In Press. “Buddha Phanit’: Revisiting Thailand’s Prosperity Religion and Occult
Economy,” in Marketing Gods: Rethinking Religious Commodifications in Asia, ed.
by Pattana Kitiarsa. London and New York: Routledge/Curzon.
“Planetsave”. 2001. “Lichens' location one of the Smokies' best-kept secrets,”
Reynolds, Frank. 1972. “The Two Wheels of Dhamma: A Study of Early Buddhism,” In The
Two Wheels of Dhamma: Essays on the Theravada Tradition in India and Ceylon.
Bardwell L. Smith, ed. Chambersburg, PA: American Academy of Religion, AAR
Studies in Religion, 3, pp. 6-30.
Sanham, Caleb. 2001. “The show goes on for Thai media and monk circus,” Asian Sex
Gazette, October 20 (from on-line version at:
Sanitsuda Ekachai. 2006. “Prosecutors let monk off the hook,” Bangkok Post, August 24.
Smith, Bardwell L. 1972. “Introduction,” in The Two Wheels of the Dhamma. Bardwell L.
Smith, ed. Chambersburg, PA: American Academy of Religion (AAR Studies in
Religion, No. 3). pp. 1-6.
Sirindhorn, H.R.H. Princess.1982. Thotsabarami nai Phutthasatsana Thērawat (The Ten
Virtues in Theravada Buddhism). Bangkok: Mahamakutratchawithayalai, 2525.
Subhatra Bhumiprabhas. 2006. “‘Brahma is always with us’,” The Nation, March 22
Sutin Wannabovorn. 2006. “Police Probing Attack on Thailand Shrine,” Associated Press
story appearing in The Washington Post, March 22.
Tambiah, S.J. 1976. World Conqueror and World Renouncer: A Study of Buddhism and
Polity in Thailand againstaHistorical Background. Cambridge: Cambridge
Thak Chaloemtiarana. 1979. Thailand: The Politics of Despotic Paternalism. Bangkok:
Social Science Association of Thailand and Thai Khadi Institute, Thammasat
Thanong Khanthong. 2006. “Thaksin the wizard attemptsasupernatural twist,” The Nation,
Taussig, Michael T. 1983. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel
Hill: The University of North Carolina Press.
Turner, Victor W. 1974. Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society.
Wales, H. G. Quaritch. 1982. Divination in Thailand: The Hopes and Fears of A Southeast
Asian People. London: Curzon.
Warren, William. 1997. Prem Tinsulanonda: Soldier and Statesman. Bangkok: M.L.
Weller, Robert P. 1994. “Capitalism, Community and the Rise of Amoral Cults in Asian
Visions of Authority: Religion and the Modern States of East and Southeast Asia.
Charles F. Keyes, Laurel Kendall, and Helen Hardacre, eds. Honolulu: University of
Hawaii Press. Pp. 141-64.
____. In Press. “The Big Picture of Religious Commodifications in Asia,” in Marketing Gods:
Rethinking Religious Commodifications in Asia, ed. by Pattana Kitiarsa. London and
New York: Routledge/Curzon.
ဘ၀ စစ်ပွဲ အနှိုင်နွှဲ နိုင်မလား…
နေရာတိုင်း လိုလိုမှာ- “ဘ၀တိုက်ပွဲ” ဆိုတဲ့ အသုံး အနှုန်းကိုပဲ တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပြီး- “ဘ၀ စစ်ပွဲ” လို့သုံးနှုန်း တာကိုတော့ အင်မတန် တွေ့ရခဲ လို့ - စာဖတ်သူများ စနိုး စနောင့် ဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ- “တိုက်ပွဲ”ဆိုတာ နဲ့ “စစ်ပွဲ” ဆိုတာကို ရှင်းလင်းစွာ အဓိပ္ပါယ် နားလည် ဘို့ ကြိုးစား ကြည့်ကြ ပါစို့။
တကယ်တော့ “တိုက်ပွဲ”ဆိုတာဟာ- Battleဖြစ်ပြီး- “စစ်ပွဲ” ဆိုတာကတော့- War ဖြစ်ပါတယ်။
“စစ်ပွဲ” တစ်ခုမှာ-“တိုက်ပွဲ” ပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ စစ်ကြီး အပြီးမှာ- ဘယ်သူ နိုင်တယ်- ဘယ်သူရှုံးတယ် ဆိုတာကို- “စစ်ပွဲ” တစ်ခုလုံး ရဲ့ အနိုင် အရှုံး ကသာ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲ တွေကတော့- သက်ဆိုင်ရာ တိုက်ပွဲ တစ်ခုချင်း အနေနဲ့သာ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း-စစ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးတဲ့- နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ ကတော့- စစ်ပွဲ ရဲ့နိဂုံး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသော စစ်ဧကရာဇ်-စစ်သူကြီး၊ စစ်သေနာ ပတိ တွေဟာ- တိုက်ပွဲများစွာ ရှုံးခဲ့ဘူး ပေမယ့်- “စစ်ပွဲ” ကိုအောင်မှသာ- အောင်မြင်သော စစ်သူကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံး အနေနဲ့ ခြုံငုံကြည့်ယင်- ဘယ် “တိုက်ပွဲ” ကတော့ ဖြင့်- စစ်ရဲ့ အဆုံး အဖြတ်ကို သတ်မှတ် ပေးလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်-ဆိုတာ က- တစ်နည်း အားဖြင့်- စစ်ပွဲ အရှုံး အနိုင် ကို သတ်မှတ်ပေးတဲ့- အဓိက “တိုက်ပွဲ” ကို အောင်မြင် နိုင် ဘို့ က အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက- တိုက်ပွဲတွေဘယ်လောက် နိုင်ခဲ့ နိုင်ခဲ့ပါစေ- စစ်ပွဲ ကြီးကို ရှုံးယင်- ရှုံးတာပါပဲ။
တိုက်ပွဲ ငယ်တွေဘယ်လောက် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပါစေ- စစ်ပွဲကြီးကို အဆုံးအဖြတ် ပေးမယ့် တိုက်ပွဲ ကိုနိုင်သူဟာ- စစ်အောင်သူ ဖြစ်တာပါပဲ။
ဥပမာ- အားဖြင့်- ကမ္ဘာကျော်“ဒင်ဗင်ဖူး” တိုက်ပွဲကြီးဟာ- ဗီယက်နမ် နဲ့ ပြင်သစ် တို့ရဲ့ စစ်ပွဲ ကြီးကိုအဆုံးအဖြတ် ပေးလိုက်တဲ့ အဓိက တိုက်ပွဲ- (Major Decisive Battle) ဖြစ်ပါတယ်။ လူအသေအပျောက်အားဖြင့်- ဗီယက်နာမ် တို့ဘက်က ပြင်သစ်တို့ ထက် များစွာ သာလွန် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ မှန်ပေမယ့်- ပြင်သစ်တွေ အညံ့ခံ ရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာမို့- နိဂုံးတိုက်ပွဲ- စစ်ပွဲကို အဆုံး သတ်ပြီး- မည်သူ နိုင်- မည်သူ ရှုံး သတ်မှတ် ပေးလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ဥပမာ- တစ်ခုအနေနဲ့တော့- ကျားထိုးယင်- ၁-ကောင် ကျွေး၊ ၃-ကောင်ရိုက်၊ ကင်းပေါက် သွားပြီး-တစ်ဘက်သူရဲ့ အကောင်တွေကို ဆက်တိုက် သိမ်းကြုံး နိုင်မယ်- စစ်တုရင် ထိုးယင်-နယ်ရုပ်၊ မြင်းစတာတွေ လိုအပ် သလို ချကျွေးခဲ့ပြီး- ပြိုင်ဘက် ရဲ့ ဘုရင်ရုပ် ကိုအပိုင် “ချက်” နိုင်မယ် ဆိုယင်- ထိုသူဟာ- အောင်နိုင်သူပါပဲ။
ဒါကြောင့်- “လမ်းဆုံးယင်ရွာတွေ့” ဆိုသလို- စစ်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးသွားယင် ဘယ်သူ နိုင်- ဘယ်သူ ရှုံး- ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကသာ အရေး အကြီး ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ-ကံ- အကြောင်း ထောက်မပြီး- လူသား ဘ၀ ကို ရောက်လာခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒီလို နဲ့ပဲ- လူ့လောကလမ်းခရီး- တနည်းအားဖြင့်- “ပုခက်မှ - သုဿန် သို့” အသွား ခရီး တစ်လျှောက်လုံး မှာ-တိုက်ပွဲပေါင်း များစွာကို လူတိုင်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ကြရသလို- ရင်ဆိုင် ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ယူဘို့ ကြိုးစားကြ ရပါတယ်။ ဒီလို တိုက်ပွဲပေါင်း များစွာ နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့- လူ့ဘ၀ စစ်ပွဲ ကြီးမှာ- ကျွန်တော်တို့ နိုင်-နိုင်သလား-ကျွန်တော်တို့ ရှုံး-နိုင်သလား ကို ဇကာထိုး စစ်ဆေးကြည့်ကြ ရအောင်-
ဒီနေရာမှာ- သံသရာခရီးသည် တွေ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့- သံသရာ စစ်ပွဲ အနှိုင် အရှုံး ကိစ္စကို တော့-ကျွန်တော် မဆွေးနွေးလိုပါ။ ဘာသာရေး သီးသန့် ဖြစ်တဲ့ အတွက်- ဘာသာရေး ရှုထောင့် ကဆွေးနွေးဘို့ အတွက် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးဝေါဟာရ တွေ၊ ဘာသာရေး အတွေးအခေါ်တွေ၊ ကြားဘူး နားဝ တွေ အားလုံးကို ထည့်မရေးပါဘူး။
ဒါကြောင့်- တစ်ဘ၀စာ စစ်ပွဲ တစ်ခု ရဲ့ အနိုင် အရှုံး အနေနဲ့ ပဲ သာမာန် လူတစ်ယောက် အနေနဲ့- ကျွန်တော်မြင်သလို- သုံးသပ် ပြပါမယ်။
ဘ၀ တာ စစ်ပွဲ ခရီးမှာ“အောင်နိုင်ခြင်း” နဲ့ “ရှုံးနိမ့်ခြင်း”တို့ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် နဲ့- ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ လမ်းခရီး မှာ- မလွှဲ မရှောင်သာ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက် ကြရတဲ့၊ - တိုက်ပွဲ တွေ အကြောင်း လေ့လာ ကြည့်ကြ ရအောင်။
မိမိဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်- လူ့လောက က ထွက်ခွာချိန် ဟာ- ဒီ တစ်ဘ၀စာ စစ်ပွဲ ရဲ့ အနိုင် အရှုံးကို ကြေညာလိုက်ချိန်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်- မြေပြင်ပေါ်မှာ ပေါ်ထွန်းလာပြီး- နေထိုင်ရှင်သန် ခဲ့တဲ့ ဘ၀ မှာ-
မိမိကိုယ်မိမိ စိတ်ကျေနပ် စွာနဲ့ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ နိုင်ခဲ့ယင်။
စိုးရိမ်ခြောက်ချား မှု၊ နောင်တ ရမှု များ ကင်းမဲ့ စွာ နဲ့ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ နိုင်ခဲ့ယင်။
သန့်ရှင်းသောမနော- မနသီကာရ နဲ့ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာ နိုင်ခဲ့ယင်။
ကိုယ်တိုင်တကယ် ပိုင်ဆိုင် နိုင်တာ တစ်ခုခု ကို ယူပြီး ထွက်ခွာ နိုင်ခဲ့ယင်-
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီတစ်ဘ၀ တာ စစ်ပွဲ မှာ အနိုင်ရသွားခဲ့ပါပြီ။
သို့သော်- ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံး ထွက်သက် မှာ-
မိမိရဲ့အမှားတွေကို ပြန်မြင်ယောင် နောင်တရပြီး- ကြေကွဲစွာ နှုတ်ဆက် ခဲ့ရယင်-
ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေ မဖြူစင် မသန့်ရှင်း စွာ နဲ့ နှုတ်ဆက် ခွဲခွာ ခဲ့ရမယ်-
စိတ်ဆင်းရဲ-ကိုယ်ဆင်းရဲ များစွာ ကို ခံစားရပြီးမှ နှုတ်ဆက် ခွဲခွာ ခဲ့ရမယ်-
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ရှုံးနိမ့် စွာ ထွက်ခွာ ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဒီတော့ကာ- ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ တစ်လျှောက်စစ်ပွဲကြီးမှာ ပါဝင်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို အုပ်စု ခွဲကြည့်ယင်- ဒီလိုတွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။
- ဘ၀ ကနဦး တိုက်ပွဲများ။
- ဘ၀ အလယ်တိုက်ပွဲများ။
- ဘ၀နိဂုံးပိုင်း တိုက်ပွဲများ။
ဘ၀ ကနဦး တိုက်ပွဲများ။
ဘ၀ အစရဲ့ ကနဦးတိုက်ပွဲကြီး တစ်ခုကတော့- အမိဝမ်းကနေ အသက်ရှင်စွာ နဲ့ လူ့လောက ကို ခြေချ နိုင်ရေးတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင် နဲ့ ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) သူနာပြု၊ ၀မ်းဆွဲ သည် တို့ကတစ်ဘက်က ကြိုးစား နေကြ သလို- အမိဝမ်းက ကလေးငယ်ဟာလည်း သူ့ အသက်ရှင်သန် ရေးတိုက်ပွဲကို သူကိုယ်တိုင် အတိအကျ နားမလည် သော်မှ- ရွပ်ရွပ် ချွံချွံ ခုခံ တိုက်ပွဲခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ သူရှုံး သွားယင်- ဒီဘ၀ အတွက် စစ်ပွဲ တစ်ခုလုံးရှုံးသွားပြီလေ။
ဒီလိုနဲ့- ပညာသင်တဲ့အရွယ် ရောက်လာတော့-
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေပညာသင်ကြရတယ်။ တကယ်တော့ ပညာသင် တယ်၊ အသိဥာဏ် ရှာတယ် ဆိုတာ- နောင်လာမည့် စစ်ပွဲတွေ ၊ဘ၀ တိုက်ပွဲတွေ အတွက် လိုအပ်တာတွေ စုဆောင်း ကြရခြင်း ပါပဲ။
- ဒီအချိန်မှာလိုအပ်တာတွေ ကို ကောင်းစွာ စုဆောင်းဘို့ အခွင့် အလမ်း ရပေမယ့်- ဒါကို တစ်ချို့က-တန်ဘိုးထားရမှန်း နားမလည် ကြပါဘူး။
- တစ်ချို့ကြပြန်တော့လည်း- မိဘတွေ ရဲ့ မပြည့်စုံ မှုကြောင့်- လက်နက် လူသူ စုဆောင်း ရမယ့်အစား- (တစ်နည်းအားဖြင့်- အတတ်ပညာ၊ အသိပညာ ဖြည့်ဆည်း ရမည့် အစား)၊ ဘ၀ တိုက်ပွဲကိုလူမမည် အရွယ် ကတည်းက စတင်ကြရပါတော့တယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် ရသူတွေ အတွက်ကတော့-
စစ်ပွဲ ကြီးတွေမစခင်မှာ- စစ် အတွက် လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင် ကြရပါမယ်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူဟာ- ပြင်ပလောကမှာ- စစ်ပွဲ ရဲ့ သေနာပတိချုပ် ဖြစ်ခဲ့ယင်- အရေးကြုံ သက်လုံ ကောင်းစေဘို့ အတွက်-စစ်ပွဲမှာ မရှိ မဖြစ် လိုအပ်တဲ့- အထောက်အကူ ပစ္စည်းများ အနေနဲ့ကတော့-
လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက်၊ တည်နေရာ ခံတပ် အနေအထား၊ ရဲမက် အင်အား၊ စွမ်းဆောင်မှု စည်းကမ်းရှိမှု၊ ကွပ်ကဲ နိုင်ရည် နှင့် အရေးအကြီးဆုံး မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာ ရှင်များ နဲ့-မဟာမိတ်များ ဖွဲ့ထားခြင်း တို့ပါပဲ။
ဒီလိုပါပဲ-နောက်လာမည့် စစ်ပွဲတွေ အတွက်- မရှိမဖြစ် တတ်အပ်တဲ့ အတတ်ပညာ တွေနဲ့၊ အခြေခံ ပညာရေးဟာ- စစ်ပွဲ အတွက် လက်နက်၊ ခဲယမ်း မီးကျောက် သဘော ဖြစ်သလို၊ တွေးခေါ် စဉ်းစားနိုင်စွမ်းဟာ- စစ်ပွဲ က ဗျူဟာ ပညာရှင် များ နဲ့ သဏ္ဍာန် တူပါတယ်။ ထိုနည်းတူ-စည်းကမ်း ရှိမှု၊ ကွပ်ကဲ နိုင်မှု ဟာ- အခြေခံ ကိုယ့်ကျင့် တရား ခိုင်မာ မှုဖြစ်သလို- အခြားသော တိုင်း၊ နိုင်ငံများ နဲ့ မဟာမိတ် ဖွဲ့ထားခြင်းဟာ- မိတ်ဆွေ များနဲ့ လူမှု ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ် ကျယ်ပြန့် အောင် လုပ်ထားခြင်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ- သူရဲကောင်းရဲမက် များရဲ့ စွမ်းအင် နဲ့ တူတဲ့ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စ ဆိုတာကို မေးထားလို့ မရပါဘူး။
ဘယ်ကိစ္စကို လုပ်ရာမှာဖြစ်ဖြစ်- အချိန် ကန့်သတ်မှု ရှိလေတော့- လုပ်စရာ အားလုံးကို ပြည့်စုံ အောင်တစ်ပြိုင်တည်း လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီတော့ကာ- ဘယ်အရာတွေ ကို ဦးစားပေးပြီး လုပ်ရမလဲလေ့လာ ပြီးနောက် အဲဒီ အတွက် လိုအပ်တာတွေ လုပ်ဆောင် နေဆဲမှာ- မိမိမလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့၊ တစ်နည်း အားဖြင့် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့- “ဟာကွက်” အားနည်းချက် ကိုအမြဲသတိထား နေရပါတယ်။ အချိန် ပြန်ရတာနဲ့ အဲဒီ “ဟာကွက်” များကို အင်အား ဖြည့်တင်းရပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ တပ်မှူး တစ်ယောက်ဟာ- လုပ်ထား နိုင်သမျှ အားလုံးတော့ထောင့်စေ့ လုပ်ထား နိုင်တောင်မှ- ဒါတွေ အတွက် အထူးတလည် အပျော်လွန် မော်ကြွားခြင်းမရှိပဲ- မလုပ်ရသေး တာတွေ၊ လစ်ဟာ သွားခဲ့ ရတာတွေ အတွက် ကိုသာ ပြန်လုပ်ဘို့၊ ပြန်ဖြည့်တင်းဘို့ စဉ်းစားပါတယ်။ ပြည့်စုံတယ် ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိပါဘူး။
စောစောက ပြောခဲ့တဲ့-ဒီပညာရေး ဆိုတဲ့ လက်နက် ခဲယမ်း မီးကျောက် စုဆောင်းမှု ကဏ္ဍမှာ- အားနည်း ခဲ့ရသူအချို့ဟာ ဘ၀ ကို စောစီးစွာ ရုန်းကန် ရယင်း နဲ့ လိုအပ်တဲ့- ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စ ခေါ်တဲ့- Adversity Quotient လို့ ခေါ်တဲ့- Resilience ရုန်းကန်နိုင်မှု- ကျဆုံးမှု ကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်မှု စွမ်းရည်များ တစ်ဘက် ကလည်း ရလာတတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုယင် တစ်ဘက်မှာလက်နက် ခဲယမ်း မီးကျောက် စုဆောင်း နိုင်မှု အားသွားပေမယ့်- တစ်ဘက်က- သူ့အနေနဲ့စစ်ပွဲ အတွက် အရည်အချင်း ပြည့်မီ တဲ့ သူရဲကောင်း ရဲမက်တွေ ရလာနိုင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
ကောင်းပါပြီ- လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက် တွေကို စုဆောင်းခြင်း နဲ့ တူတဲ့ အတတ်ပညာတွေ ကို လေ့လာသင်ကြားခွင့် ရတဲ့ သူတွေ ကတော့- ကိုယ်တိုင် ရုန်းကန် တိုက်ပွဲ မစရသေးတဲ့ အတွက်ရဲရင့်-တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ မရသေးတဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သူတို့လည်း တစ်ခုရပြီး- တစ်ခု အတွက် မပြင်ဆင်နိုင်သေးဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
သို့သော်- ရရှိ လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေ၊ ရနိုင်စရာ ရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်း တွေကို- ယူထားရ ကောင်းမသိ- နောင်တိုက်ပွဲ တွေ အတွက် လိုအပ် လာမယ့် အရာ တွေကို- စုဆောင်း ပြင်ဆင် ထားရမှန်းမသိသူတွေ အနေနဲ့ ကြတော့ရော-
သူတို့ အနေနဲ့တော့- ၂-ခုစလုံး ဆုံးရှုံး သွားစရာပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒီတော့ကာ နောက်လာမယ့် လောက တိုက်ပွဲ တွေမှာ- ပျောက်ကြား တိုက်ခိုက်၊ ခြုံခို တိုက်ပွဲ ပဲ လုပ်ခွင့် လောက်ပဲ သူတို့ ရနိုင်ပါတော့တယ်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀-ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားစဉ်ကာလမှာ- မိဘ ရဲ့ ကားလုပ်ငန်းမှာ- ကျွန်တော် စပယ်ယာ အနေနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ် တစ်အုပ်ယူပြီး- စာဖတ်ယင်း ကားအော်ဒါ စောင့် နေစဉ်မှာ-ကျွန်တော်လို အခြား ကျောင်းသားတွေဟာ- မြို့နယ် ကျောင်းသား အသင်း လက္ဘက်ရည်ဆိုင်အတွက်- လက်မှတ် လိုက်ရောင်းနေကြတာကို သိပေမယ့်- ကျွန်တော်က ဒါကို ဂရုမပြုမိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော် လုပ်နေတာ မှန်တယ်ပဲ ထင်နေမိတယ်။
ဒီအချိန်မှာ-ကျွန်တော့်ကို အလယ်တန်း တုန်းက သင်ဘူးပေးတဲ့ ဆရာ တစ်ယောက်က- ကျွန်တော့် ကားဆီ ကိုရောက်လာယင်း- ကျွန်တော်နဲ့ စကားစမြည် လာပြောပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ- ဆရာပြောသွားခဲ့တဲ့ စကား တစ်ခုကို ယခု အထိ အမြဲ မှတ်မိ နေပါတော့တယ်-
“မင်းက-အခုဆိုယင် မင်းကိုမင်း- အဓိပ္ပါယ် ရှိတာကို လုပ်နေတယ်။ မိဘ အတွက်၊ အိမ် အတွက်အကျိုးရှိတာကို လုပ်နေတယ်။ အခြားသူတွေက တော့- ဝေလေလေ လုပ်နေတယ်-လို့ ထင်ကောင်းနေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်- ငါ့ အနေနဲ့ ပြောရယင်- အခု မင်းရဲ့ လက်ရှိ ရည်မှန်းချက်ဟာ-မင်းကား ကို အော်ဒါ ရဘို့ အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အကန့် အသတ် တစ်ခုစာပဲ တန်ဘိုးရှိတယ်။ မင်းသူငယ်ချင်း တွေကျတော့- လူတွေ ဆီကို တစ်အိမ် တက်ဆင်း- လက်မှတ်ရောင်းကြယင်း- အပေါင်း အသင်း၊ မိတ်ဆွေ ကဏ္ဍ၊ လူတွေရဲ့ အလိုက်ကန်းဆိုး၊ လူတွေအကြောင်းကို ပိုသိ နိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးကို ရသွား ကြတယ်။ ဒါဟာ အကန့် အသတ်မရှိဘူး။ဒီတော့- ဘယ်ဟာက ပိုတန်ဘိုး ရှိသလဲ မင်းစဉ်းစားပါ”.တဲ့။
အင်မတန် မှန်တဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒါကို မမြင်မိခဲ့ဘူး။
ဒီတော့ကာ- သူတို့ဟာ-တစ်ခြားခြား သော အရည်အသွေးပိုင်းတွေ၊ အခြားခြား သော လိုအပ်ချက်များ ကို ကျွန်တော့်ထက် သာပြီး ရသွား နိုင်စရာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မိမိအတွက် လိုအပ်တာကိုပြင်ဆင်ယင်း တစ်ခြားဘက်မှာ လစ်ဟာသွားခြင်း ဖြစ်တာကို ဆရာက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်- မိဘ အရွယ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့- အခြား မိဘ များကို အကြံ ပြုချင်တာကတော့-
ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာမိဘများဟာ- ကိုယ့်သားသမီး လိမ္မာတယ် ဆိုယင်၊ စာတော် တယ် ဆိုယင် ဂုဏ်ယူ ချင်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်- တစ်ဘက်မှာ- စာအုပ်ပုံ ထဲမှာသာ နစ်မွမ်းပြီး- ဘ၀ အကြောင်း မသိဘူး ဆိုယင်-နောက် လက်တွေ့ ရုန်းကန် ရတဲ့ ဘ၀ရပ်တည် ရေး တိုက်ပွဲမှာ- မလိုလား အပ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေ နဲ့လည်း ရင်ဆိုင် ရတတ်ပါတယ်။
ကျောင်းတွေတက်-စာတွေကြည့်၊ လူမှုရေး အားနည်း ချက်ကို- ဖုံးကွယ် တဲ့ အနေနဲ့ - စာကိုပဲပိုအာရုံစိုက် ခဲ့ရတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ဟာ- နောက်ကြယင်- ဗြူရိုကရက် တစ်ယောက် ဖြစ်သွားနိုင်သလို၊ ရာထူး ကြီးသော်လည်း- လက်အောက်ငယ်သား များကို အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမကောင်းတဲ့- သူတစ်ဦး ဖြစ်သွား နိုင်စရာတွေ ရှိပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အကြောင်း၊ လူတွေရဲ့ခံစားချက် ကို နားမလည် နိုင်တဲ့ အားနည်းချက် နဲ့၊ မိတ်ဆွေ အသိုင်းအ၀ိုင်း ရဲ့တန်ဘိုး နားမလည် ခြင်း စတဲ့ လိုအပ် ချက်တွေ- သူမှာ ထင်ထင် ရှားရှား ပါသွားခဲ့ပြီလေ။
ပညာဝန် ဦးဘိုးကျား ရေးခဲ့တဲ့ဘိလပ်ပြန် မောင်သောင်းဘေကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်း ဖတ်ခဲ့ရ ပေမယ့်- တကယ်တမ်းတော့- ကောင်းကောင်း နားမလည် ခဲ့မိပါ။
ကိုယ်တိုင် လက်ကကိုင်သွားလို့ ရတဲ့ အိတ်တစ်လုံး အတွက် ကူလီခေါ်၊ စကားပြောယင် ဘိုလို ညှပ်ပြော၊အများက အထင်ကြီးအောင် ဟန်ထုတ်၊ ရွှံ့ဗွက် ရေအိုင် တွေ့ယင်- အမေနဲ့ ညီမတွေက ပွေ့သွားရတဲ့ မောင်သောင်းဘေ ကို ဘယ်သူ ဖန်တီးခဲ့ပါသလဲ-
တကယ်တမ်းက သူ့မိသားစုနဲ့ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကသာ ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘ-ဆွေမျိုး မောင်နှမအားလုံး ပညာတတ်လောကမှာ- ပညာတတ် တစ်ယောက် ဖြစ်လာသူ အနေနဲ့- သူကိုယ်သူ ဟန်တမင်ထုတ်စရာ မလိုသလို- ဘ၀င်ဟပ် စရာလည်း မရှိပါ။
မိမိနဲ့ ပတ်သက်ရာအနီးဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်- မိဘ အသိုင်း အ၀ိုင်းမှာ- မိမိဟာ ပညာ အတတ်ဆုံး ဖြစ်လာခဲ့ယင်၊ ဖြစ်စေ၊ မိဘ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူနေမှု အဆင့် အတန်း မမြင့်ခဲ့ဘူးပဲ- ကိုယ့်လက်ထက်ကျမှ အဆင့်မြင့် မြင့် နေထိုင်ခွင့် ရလာခဲ့ယင် ဖြစ်စေ၊ မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ- ရာထူး ဌာနန္တရ ကြီးမားသူ မရှိခဲ့ပဲ-ကိုယ်တစ်ယောက် သာလျှင် သူတို့ ထက် ထူးချွန်ခဲ့ယင် ဖြစ်စေ- “မောင်သောင်းဘေ” တွေ ပေါ်လာတတ်စမြဲပါပဲ။ ခေတ်သစ် မောင်သောင်းဘေ များစွာကိုလည်း ကျွန်တော် ကြုံတွေ့ နေခဲ့ရသလို-ကြုံတွေ့ နေရဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀ အလယ်ပိုင်း တိုက်ပွဲများ။
တကယ်တမ်း အားဖြင့်ကတော့- ဘ၀ အလယ်ပိုင်း တိုက်ပွဲများဟာ- စစ်မျက်နှာ ပြင် အမျိုးမျိုး မှာ ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်တာမို့- တိုက်ပွဲများစွာ ပါဝင် နေတဲ့- ရည်ရွယ်ချက် Mission မျိုးစုံ ပါဝင် နေတဲ့ စစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀တစ်သက်တာ စစ်ပွဲ ကြီးအတွက်- ဆိုယင်လည်း- ဘ၀ -အလယ်ပိုင်း စစ်ပွဲ များရဲ့ အနေအထား ဟာအရေးကြီးတဲ့ အတွက်- သေသေချာချာ လေ့လာ သုံးသပ် သင့်တဲ့- စစ်ပွဲ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ မှာ- မိမိရောက်ရှိရာ စစ်မြေပြင် ပေါ်မူတည်ပြီး-
- အချို့သူများက-စစ်မြေပြင် အပေါ်စီး နေရာ ကောင်း က တိုက်ခိုက်ခွင့်ရသူများ။
- အချို့သူများကျတော့-မိမိရောက်ရှိထားတဲ့ နေရာ ဟာ ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိတဲ့ အတွက်- နေရာကောင်း ရအောင်ပထမဦးစွာ ကြိုးစားရပြီးမှ “အောင်မြင်နိုင်မှု Mission” အတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြရသူများဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာ-မှာ ဘ၀အလယ်ပိုင်း စစ်ပွဲကာလများကို ကြည့်မယ် ဆိုယင်-
- ပညာရေးစစ်မျက်နှာ ဒေသ-
- အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင် ရေး စစ်မျက်နှာ ဒေသ-
- အလုပ်အကိုင်ဘ၀ စစ်မျက်နှာ ဒေသ-
မည်သည့် စစ်မှာ မဆို-လှည့်စားချက်များစွာ ရှိပါတယ်။ စစ်အတွေ့ အကြုံ မရှိသူ- ဥာဏ်ရည် နုနည် သူများအနေနဲ့ တစ်ခုကောင်း၊ တစ်ချက်ကောင်း အနိုင်ရလိုက်တဲ့ အခါမှာ- တကယ်နိုင်သွားပြီထင်မိတတ် ကြပါတယ်။ အဲဒီ အခါမှာ- ကောင်းကောင်း ပြန်ခံရတော့ တာပါပဲ။
ဥပမာ- တစ်ဘက် ရန်သူကို-မိမိက ချေမှုန်း လိုက်တဲ့ အခါ- ရန်သူ တပ်တွေဟာ- ကြောက်လန့် တကြား နဲ့ နောက်ဘက်လှည့်ပြေးကြတဲ့ အခါ- လက်စသတ် ချေမှုန်းဘို့ ဆက်လိုက်ယင်း- ရန်သူ က မြူခေါ် သွားတဲ့သတ်ကွင်း ထဲ ကို ရောက်သွားမိတတ် ပါတယ်။
ဒီအတိုင်းပါပဲ- လောကဓံဆိုတဲ့ ရန်သူ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါမှာ- သူဟာ အင်မတန် ပရိယာယ် များတဲ့ ရန်သူ ဖြစ်လေတော့
တစ်ခါတစ်လေကြယင် ကိုယ် အနိုင်ရသလို နဲ့- လာဘော- ဆိုတဲ့ လာဘ် လာဘ ပေါများခြင်း၊ ယသော- ဆိုတဲ့-မိတ်ဆွေ ရောင်းရင်း အပေါင်းအသင်း တပည့် တပမ်းများ ပေါများလာခြင်း၊ ပသံသာ၊ ဆိုတဲ့ချီးမွမ်း လေးစားမှုကို ခံရခြင်း၊ သုခံ- ဆိုတဲ့ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာ ကို ရခြင်းဆိုတာတွေကို ရတဲ့ အခါ မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ- အောင်မြင်သူ ဖြစ်တဲ့ ဆိုတဲ့ အထင်ဝင်ရောက် ပါတော့ တယ်။ တကယ်တော့- ဒါဟာ- ရန်သူ ဖြစ်တဲ့ လောကဓံ တရား ရဲ့-မြူခေါ်သွားတဲ့ ချောင်ပိတ် သတ်ကွင်း ဖြစ်တာကို ကျွန်တော်တို့ ရုတ်တစ်ရက်သတိလစ်သွားမိတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါ တစ်လေကြတော့လည်း- ကျွန်တော်တို့ကို- လောကဓံ တရားက အလစ်ထိုး- ချောင်ခို Ambush တိုက်ခိုက်တတ်ပါသေးတယ်။ မတော်တစ်ဆ ဖြစ်တာမျိုး၊ ရောဂါတစ်ခု ရုတ်တစ်ရက် ကောက်ခါ ငင်ခါရတာမျိုး၊ စသဖြင့်ပေါ့။
လှည့်စားတတ်သော အချစ် စစ်မြေပြင်။
လူတိုင်း အနေနဲ့-ကြုံတွေ့ ရတတ်တဲ့ ဒီစစ်မြေပြင်ဟာ- လှည့်စားမှု တွေ နဲ့ အင်မတန် ထူပြောတဲ့ နယ်မြေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
အဆိုးဝါး ဆုံးကတော့-ကိုယ်-ကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ် မိမိ လှည့်စားနေမိတတ်ခြင်း ပါပဲ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ လည်း- သူတကယ် ဘာကို လိုချင်တာလဲ သူမသိတာမျိုး ဖြစ်တတ် ကြသလို- ယောက်ျားလေးများ အနေနဲ့လည်း- မိမိ လိုချင်တာ ဘာလဲ သေသေချာချာ မသိပါပဲ လျှက်- စွန့်စား မိကြ၊နောင်မှ နောင်တ ရကြရတဲ့ စစ်မြေပြင် တစ်ခုပါပဲ။
ဘ၀ အောင်မြင်မှုတွေကြိုးစားကြယင်း နဲ့- အတိုင်းအတာ တစ်ခု အနေနဲ့ ဒီစစ်မြေပြင် မှာလည်း အောင်မြင်လာရော၊ တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလား ဆိုတဲ့ အတွေး တွေ ၀င်လာတတ်ကြတယ်။ သောက်လေ သောက်လေငတ်မပြေတဲ့- လောဘ ဆားငန် ရေမှာ- နစ်မွန်းသွားယင်း နဲ့- အခြား စစ်မြေပြင်တွေရှိနေမှန်း ကို မေ့သွားကြပါတော့တယ်။
Obsession ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ- တစ်ကယ်တမ်း အားဖြင့်-အသေးအမွှား ကိစ္စ တစ်ခု ကို - လုပ်ဆောင်ဘို့ အတွက် သဘာဝမကျ-တဲ့ စိတ်အကြောင်း ရင်း တစ်ခု၊ ဘာဖြစ်လို့ မှန်း မိမိ ကိုယ်တိုင် တောင် ရန်ဖန်ရန်ခါ မသိရပဲ- အလိုလို အချိန်ကုန် ခံပြီး လုပ်မိနေတတ်တဲ့ စိတ်တစ်မျိူးပါ။
လက်တွေ့ ဥပမာ- တစ်ခု အားဖြင့်-
ကျွန်တော့် တပည့် တစ်ဦးဟာ- AutoCAD ပုံ ဆွဲတဲ့ အခါမှာ Dimension ခေါ်တဲ့ အတိုင်းအတာ တွေ ကို အင်မတန်အချိန်ယူပြီး- လုပ်ဆောင် တတ်ပါတယ်။ ပုံဆွဲတာက ၁-နာရီ ကြာပေမယ့်- အတိုင်းအတာ တွေကို တပ်ဘို့ အတွက်- နောက်ထပ် ၁-နာရီ လောက် ကြာအောင်- သူစိတ်တိုင်း ကျအောင် တပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ- အတိုင်းအတာ တွေ တပ်ရခြင်း က- အခြားသူတွေ ပုံကို ဖတ်ရာမှာနားလည် နိုင်အောင် တပ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတကာ စံညွှန် အတိုင်း တပ်ပြနိုင်ယင်လုံလောက်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့်- ဒါကို သူစိတ်တိုင်း မကျပါဘူး။ တပ်ကြည့်- ရေးကြည့်လိုက်-စာလုံး အနေအထား၊ အရွယ် အစား- ပြပုံ အနေအထား ကို စိတ်တိုင်း မကျ မချင်း ထပ်ခါ ထပ်ခါဖျက်လိုက်၊ ပြန်ပြင်လိုက်၊ ပြန်တပ် လိုက်- လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ ကျေနပ်သွားတယ်မရှိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ- သူ့ကို အလုပ်က- လစာပေး ခန့်ထားတယ်၊ တစ်ရက် တာ ကာလမှာ-သူ့အလုပ် ဘယ်လောက် ပြီးသွားတယ် ဆိုတာကိုလည်း ဆန်းစစ် ဘို့ အတွက်- ဘယ်လိုပြောပြော-အဲဒီ နေရာ ရောက်ယင်- သူမေ့သွားပြီ။ ဒါကိုပဲ အချိန်ကုန် ခံ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့- သူနဲ့ အတူတူ လုပ်ခဲ့သူများ ရာထူး အနေအထား တက်သွား ပေမယ့်- သူကတော့မပြောင်းလဲပါဘူး။
တစ်ချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုတည်းသာ ရှိခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှာ တက်ယင်း- ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတန်းတူ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိန်းကလေး အရေအတွက်ကို ၁၅% သာလက်ခံတဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ သူဟာ လူနည်းစု မိန်းကလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီး- အင်မတန်ထူးချွန်ခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်- အတန်းထဲမှာအမှတ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့- ခုံနံပတ် (၁) နေရာ -ရဘို့- ကိစ္စဟာ-သူ့ရဲ့ စွဲလမ်းငြိတွယ် သွားတဲ့ စိတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘ၀ တိုက်ပွဲ - ဘ၀ အောင်ပွဲ အတွက်ဒီစစ်မြေပြင်ဟာ အရေး ဘယ်လောက် ပါသလဲ ဆိုတာကို ဝေဘန် ဆန်းစစ် ရမည့် အစား- ဒီနေရာကို ရဘို့ အတွက်-
- သူ့ရဲ့စာကြည့်ချိန် တွေကို မြှင့်တင်ပါတယ်။
- မည်သူကမျှသူ့ကို လာစာမေးလို့ မရအောင်- မိန်းကလေး ဆောင်မှာ လူမရှိတဲ့ စတိုခမ်း ထဲမှာသွားနေပါတယ်။
- သူ့အချိန်မကုန်အောင်- မည်သူနဲ့မျှ ဆက်ဆံ ခြင်း မရှိတော့ အတွက်- အပေါင်းအသင်း ကဏ္ဍကိုသူကိုယ်တိုင် ပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ-သူ အနေနဲ့ စွဲစွဲ လမ်းလမ်း လိုချင်တဲ့ အနေအထား ရဘို့ ဘယ်လိုကြိုးစား ကြိုးစား-မရခဲ့တဲ့ နောက်မှာ- စိတ်ရောဂါ ရပြီး- လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်ကြာကပဲ လူ့ဘ၀ ကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ရ ပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ပညာတွေ သင်ယူကြတယ် ဆိုတာ- မိမိဘ၀ အတွက် လိုအပ်တာ စုဆောင်းခြင်း၊ အခက် အခဲကြုံတွေ့ချိန်မှာ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ကို သင်ယူရခြင်း - ဆိုတဲ့ စစ်လက်နက်၊ခဲယမ်း မီးကျောက် စုဆောင်းသဘော ဖြစ်ပေမယ့်- တစ်ချို့သူတွေ အတွက် အဲဒါကိုမေ့သွားတယ်။ ဘ၀ တစ်ခုလုံးရဲ့ စစ်ပွဲကြီး ကို မမြင်နိုင်တော့ပဲ- ဒီနေရာမှာ မီးကုန်ယမ်းကုန် စစ်တလင်း ခင်း လိုက်ခြင်း နဲ့ပဲ- ဘ၀ စစ်ပွဲကြီး အရှုံးပေးလိုက် ရမှန်းမသိပေးလိုက် ကြရပြန်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က-တရုပ်နိုင်ငံ မှာ ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပညာတွေ ထွန်းကားခဲ့တယ်။ သိုင်းဝတ္ထု တွေဟာချဲ့ကား ထားတာ မှန်ပေမယ့်- နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်း အမှန်တွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ-ကိုယ်ခံ ပညာ ဆိုတာ ဟာ-
မိမိနဲ့မိမိ ချစ်သူတွေကို ရန်သတ္တရု ပြုသူ ကြုံလာခဲ့ယင် ကာကွယ် နိုင်ဘို့၊ မိမိ နေထိုင်ရာမိမိ လူမျိုး၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ကာကွယ် ဘို့ ဖြစ်ပေမယ့်- တကယ့် တကယ်လဲ ကျရော-အဲဒီ ခေတ်က တရုပ် ကွန်ဖူး ပညာရှင်တွေဟာ- မိမိ အချင်းချင်း ပဲ ဘယ်သူကသာ တယ် ဆိုတာနဲ့ အသေခံ ပြိုင်နေခဲ့ကြပြီး- ရန်သူ မွန်ဂိုတွေ ကိုလည်း အရှုံးပေးခဲ့ရ၊ ရန်သူမန်ချူးတွေကိုလည်း အရှုံးပေးခဲ့ရပြီး မူလ ကိုယ်ခံပညာ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ဆန့်ကျင်ရာ ကို ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ-အဆင့်မြင့်တဲ့- စကြာဝဠာ ရဲ့ ကြယ်တာရာ တွေ သွားလာ မှုဆိုင်ရာ ကို တွက်ချက်၊လေ့လာပြီး- လူ့လောက အတွက် ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ကြိုတင် ခန့်မှန်း တွက်ချက်တဲ့ ဗေဒင် ပညာရပ်ဟာ- အတတ်ပညာ တင်သာမက- အတွေး အခေါ် ပညာ တွေ မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း- စိတ်မကောင်းစရာ အနေနဲ့က- အာရှတိုက် က ဗေဒင် ပညာရှင် အများစုဟာ- စားဝတ် နေရေး အတွက်- ဖြစ်သလို လှုပ်ရှားယင်း၊ အချင်းချင်း ပညာပြိုင်၊ ဝေဘန်နေကြယင်း နဲ့ပဲ- ကမ္ဘာနဲ့ တကွ လူသား အကျိုးကို ဆောင်ရွက် နိုင်သူ မရှိသလောက် ကိုဖြစ်ရပါတော့တယ်။
- တကယ်တော့ဒါတွေဟာ လောကဓံ စစ်ပွဲရဲ့ လှည့်စားချက်ပါပဲ။
အရေးအကြီးဆုံး- အချက်ကိုခုမှ ပြောရပါတော့မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘ၀ စစ်ပွဲကြီးမှာ- တိုက်နေကြရတဲ့- တိုက်ကြမယ့် ရန်သူ အကြီးအမှူးတွေက ဘယ်သူတွေပါလဲ..
ပထမရန်သူကတော့- ပြင်ပ ရန်သူ ဖြစ်တဲ့- စားဝတ်နေရေး ဆိုတဲ့ ရန်သူ- မငတ် အောင် အတွက်၊ရာသီ ဥတု နှိပ်စက် မခံရအောင် အတွက်၊ မိမိ ကိုယ်တိုင် နဲ့ မိသားစု အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်။ ဒီရန်သူ နဲ့ တိုက်ပွဲ မှာ- တစ်နည်းအားဖြင့် ဒီစစ်မြေပြင်မှာအနိုင်ရကောင်း ရနိုင်တယ်။
ဒုတိယရန်သူကတော့- သဘာဝ ရန်သူ ဖြစ်တဲ့- အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း တို့ ဆိုတဲ့- လောကနိယာမ တရား ဆိုတဲ့ ရန်သူ စစ်သူကြီးနဲ့ ယှဉ်ရတဲ့ ပွဲ။ ဒီစစ်ပွဲကတော့- ကိုယ့်ဘက်ကခံစစ် သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဘက် က အဆက်မပြတ် တိုက်ခိုက်မှုကို ဘယ်လောက် တည်ငြိမ်စွာ တောင့်ခံ နိုင်သလဲ က- ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ အခြေအနေ ကို ပြဆိုတယ်။
တတိယ ရန်သူကတော့- ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အတွင်းစိတ်၊ တနည်းအားဖြင့်- ပူပန် ရခြင်း၊ နောင်တရခြင်း၊မကောင်းကြံစည်မိခြင်း၊ မကောင်းတွေး မကောင်းမြင် တတ်တဲ့- အနှုတ် လက္ခဏာ ဖြစ်စေတဲ့စိတ်၊ မိမိ ရဲ့ အတ္တစိတ်၊ မိမိ မှာ ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ဆုံးရှုံးမှာ စိုးရိမ်ကြောက်လန့် တတ်တဲ့ စိတ် အစရှိတဲ့- အတွင်း စိတ် ဆိုတဲ့ ရန်သူ စစ်သူကြီး နဲ့တိုက်ပွဲ ၀င်ရခြင်း ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက် အမြင် ရှိထားတယ်။ ဘယ်လောက် ရဲရင့် တယ် ဆိုတာတွေက-ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်မှာ-
စစ်အရှံး အနိုင်ကြေညာပေးလိုက်တော့ မှာပါပဲ။